Semalt E-Commerce SEO - သင်၏အွန်လိုင်းဆိုင်တွင်ပြောင်းလဲခြင်းကိုမည်သို့အကောင်းဆုံးဖြစ်စေမည်နည်း။
အွန်လိုင်းစတိုးကိုစဖွင့်ခြင်းသည်အွန်လိုင်းရောင်းရန်လမ်း၏အစမျှသာဖြစ်သည်။ ပန်းတိုင်သို့ရောက်ရန်အွန်လိုင်းစတိုးတွင်ပြောင်းလဲခြင်းကိုဆုံးဖြတ်သည့်အရာများစွာကိုဂရုပြုရန်လိုအပ်သည်။ သင်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်သို့လာရောက်လည်ပတ်သူများစွာကိုမောင်းထုတ်ရန်မှာအဘယ်နည်း။
သင်၏ဝဘ်စတိုးသို့ the ည့်သည်များလာရောက်လည်ပတ်ခြင်းသည်သီအိုရီအရမခက်ခဲပါ။ ၎င်းသည်ဤရည်ရွယ်ချက်အတွက်သင့်လျော်သောရန်ပုံငွေများကိုခွဲဝေချထားပေးရန်ကိစ္စဖြစ်သည်။ ဂူဂဲလ်ကြော်ငြာများ (သို့) Facebook ကြော်ငြာများကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ SEO ကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းအားဖြင့်။ ကျွန်ုပ်တို့ရရှိသောဘတ်ဂျက်ကိုအသုံးပြုရန်မခက်ခဲပါ၊ သို့သော်စတိုးဆိုင်သည်အမြတ်အစွန်းများစွာရသင့်သည်၊ ထို့ကြောင့်ရည်မှန်းချက်မှာရောင်းချမည့် ၀ ဘ်ဆိုဒ်တစ်ခုဖန်တီးရန်ဖြစ်သည်။
သင်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်သို့ ၀ င်သူတိုင်းကိုကုန်ပစ္စည်းများမှာယူရန်သင်လုပ်လိမ့်မည်မဟုတ်သော်လည်းသင်၏ပြောင်းလဲမှုနှုန်းကိုအမြင့်ဆုံးမြှင့်တင်ရန်ရည်မှန်းသင့်သည်။ ''
၎င်းသည်အသုံးပြုသူမှတိကျသောလုပ်ဆောင်မှုတစ်ခု၏စွမ်းဆောင်ချက်ဖြစ်သည်။ ကုမ္ပဏီ၏ကုန်စည်ပြပွဲဖြစ်သည့် ၀ ဘ်ဆိုဒ်တစ်ခုပေါ်တွင်ပြောင်းလဲမှုသည်ကမ်းလှမ်းမှုတစ်ခုအတွက်တောင်းဆိုမှုတစ်ခုနှင့်အတူစုံစမ်းမေးမြန်းခြင်းတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။ အွန်လိုင်းစတိုးတစ်ခု၏ရောင်းဝယ်မှုသည်ရောင်းအားဖြစ်သည်။ လုပ်ဆောင်သောလုပ်ဆောင်မှုများသည်မျှော်လင့်ထားသည့်ရလာဒ်များဟုတ်မဟုတ်ကိုခြေရာခံနိုင်ရန်အတွက်သင်၏အွန်လိုင်းစတိုးသို့ ၀ င်ရောက်လာသူရာခိုင်နှုန်းမည်မျှ ၀ ယ်သည်ကိုဖော်ပြသည့်ပြောင်းလဲခြင်းနှုန်းကိုသင်စစ်ဆေးသင့်သည်။
ဥပမာ - သင်၏ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုရက် ၃၀ အတွင်းလူ ၁၀,၀၀၀ လည်ပတ်ခဲ့သည်။ အသုံးပြုသူများနှင့် 200 သူတို့ထဲကထုတ်ကုန်မှာယူခဲ့သည်။ ဤကိစ္စတွင်ကူးပြောင်းနှုန်းသည် ၂% ဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့်အဲဒါအများကြီးလား နည်းနည်း အခြေအနေအရပဲ။
အသွားအလာရင်းမြစ်ပေါ် မူတည်၍ စတိုးဆိုင်အတွက်ယေဘူယျပြောင်းလဲခြင်းနှင့်ပြောင်းလဲခြင်းနှစ်ခုလုံးကိုသင်ရေတွက်နိုင်သည်။ ဤတွင်သင်၏ပျမ်းမျှပြောင်းလဲနှုန်းကိုအခြေခံထားသောအချက်များမှာ -
ထုတ်ကုန်များကိုထောက်ခံသည့်စာမျက်နှာများနှင့်မိတ်ဖက် ၀ က်ဘ်ဆိုက်များ - ၅.၄၄% သည်အပြောင်းအလဲနှုန်းအမြင့်ဆုံးဖြစ်သည်။ ဤကိစ္စတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဖိုရမ်များသို့မဟုတ်ဘလော့ဂ်များမှအခြားသူများအကြား၊
အီးမေးလ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေး ၅.၃၂ ရာခိုင်နှုန်း
ဘရောက်ဇာတွင်ဝက်ဘ်ဆိုက်လိပ်စာကိုရိုက်ထည့်ပြီးနောက်တိုက်ရိုက်သွင်းမှုများ (ရည်ညွှန်း) - ၂.၁၉ ရာခိုင်နှုန်း
ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များမှအော်ဂဲနစ်အသွားအလာ: ၂.၀၈ ရာခိုင်နှုန်း
ဤရွေ့ကားခြုံငုံပြောင်းလဲခြင်းနှုန်းထားများဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, စက်မှုလုပ်ငန်းပြissueနာလည်းရှိပါသည်။ သင်မည်သည့်အရာကိုရောင်းချသည်ဖြစ်စေ၊ ထိုနှုန်းသည်အတူတူပင်ဖြစ်သည်။ တစ် ဦး ချင်းစက်မှုလုပ်ငန်းများကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားလျှင်၊
အစားအစာနှင့်အချိုရည် - 3.58%
ကျန်းမာရေးနှင့်အလှအပ - ၃.၀၈%
ဂိမ်းများနှင့်ကစားစရာများ - ၂.၄၃%
လက်ဝတ်ရတနာနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ - 2.14%
အားကစားနှင့်အပန်းဖြေမှု - ၁.၉၆%
လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများ - ၁.၂၇%
ပရိဘောဂ - 0.85%
သင်မြင်သည့်အတိုင်းပြောင်းလဲခြင်းနှုန်းသိသိသာသာကွဲပြားသည်။ ပရိဘောဂအတွက်အစားအစာနှင့်သောက်စရာများကိုရောင်းသောစတိုးဆိုင်များထက်ပျမ်းမျှလေးဆနိမ့်သည်။ ဒါကအလွန်ကြီးမားတဲ့ခြားနားချက်ပါ။
တကယ်တော့၊ e-commerce မှာသင်အမြဲတမ်းဆန်းစစ်လေ့လာပြီးရလဒ်တွေကိုတိုးတက်အောင်လုပ်သင့်တယ်၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့စျေးကွက်ကအမြဲတမ်းပြောင်းလဲနေတယ်၊ ​​ပြီးတော့ဖောက်သည်တွေရဲ့လိုအပ်ချက်တွေပါ။ သင်မျှတသောပြောင်းလဲမှုနှုန်းကိုရရှိခဲ့လျှင်ပင်သင်၏ဂုဏ်သိက္ခာကိုမြှင့်တင်သင့်သည်ဟုမဆိုလိုပါ။ သင်၏စတိုးဆိုင်နှင့်ပြိုင်ဘက်များ၏ဝက်ဘ်ဆိုက်များကိုဆန်းစစ်သင့်သည်။ ဤနည်းဖြင့်သာသင်၏စီးပွားရေးကိုတိုးတက်စေပြီးသင်၏ရလဒ်များကိုတိုးတက်စေလိမ့်မည်။ သင့်ရဲ့ပြောင်းလဲမှုနှုန်းကိုတိုးမြှင့်ဖို့ဘာလုပ်ရမှန်း? အမှန်မှာ၊ စတိုးတစ်ခုစီအတွက်အဆင့်အမျိုးမျိုးလိုအပ်သည်။
သင်၏ပြောင်းလဲခြင်းနှုန်းကိုတိုးတက်စေရန်သင်ပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သည့်အဆင့်များသည်စာမျက်နှာပုံစံနှင့်မည်သည့်အမှားများကိုပြင်ဆင်ရန်ပေါ်တွင်မူတည်သည်။ သင်သည်သင်၏စတိုးဆိုင်၌ကျွန်ုပ်၏အဆိုပြုချက်များစွာကိုပြုလုပ်ပြီးဖြစ်သော်လည်းဖြစ်နိုင်သည်၊ အနည်းဆုံးအချို့ကိုသင်အသုံးပြုလိမ့်မည်။
မကြာခဏဆိုသလိုကျွန်ုပ်သည်ပေးထားသောစတိုးတစ်ခုတွင်တစ်ခုခုရှာသောအခါဂူးဂဲလ်ရှာဖွေခြင်းကိုသုံးသည်။ အဘယ်ကြောင့်? မကြာခဏစတိုးဆိုင်၏ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်သည်စက်ရုပ်များ၌အရင်းအမြစ်များရှိသော်လည်းကျွန်ုပ်ရှာဖွေနေသည့်ထုတ်ကုန်များကိုမကြာခဏမဖော်ပြနိုင်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ အဆိုပါ typos ကိုလည်းပြproblemနာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ စတိုးဆိုင်များရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များတွင်သင်အမှားတစ်ခုပြုလုပ်မိလျှင်သင်ရှာဖွေနေသည့်ထုတ်ကုန်ကိုမကြာခဏတွေ့ရလိမ့်မည်မဟုတ်သော်လည်း၎င်းသည်တည်ရှိရာစာမျက်နှာကိုဂူဂဲလ်တွင်ရည်ညွှန်းထားသရွေ့ဂူဂဲလ်ကပြသပြီးဖြစ်သည်။ ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များ၏သဲလွန်စများသည်လည်းတန်ဖိုးရှိသည်။
ညံ့ဖျင်းသောရှာဖွေရေးအင်ဂျင်သည်အသုံးပြုသူအားသင်၏စတိုးဆိုင်တွင် ၀ ယ်ယူခြင်းကိုတားဆီးနိုင်သည်။
ငါဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းသင်ရွေးချယ်သောစျေးကွက်ရှာဖွေရေးလှုပ်ရှားမှုပေါ် မူတည်၍ ၎င်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများသည်ကွဲပြားနိုင်သည်။ ဥပမာပြောင်းလဲမှုနှုန်းနိမ့်သည် ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်မှကြော်ငြာများမှထိုကဲ့သို့သောလုပ်ဆောင်မှုများကိုအသုံးချခြင်းသည်အကျိုးမရှိဟုမဆိုလိုပါ။ ဖောက်သည်တစ် ဦး အားဝယ်ယူရန်ကုန်ကျစရိတ်ကိုလည်းထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်သည်။ ဒါဟာလူမှုရေးကွန်ယက်၏အမှု၌အသေးငယ်ဆုံးဖြစ်နိုင်သည်။ တစ် ဦး ချင်းလှုပ်ရှားမှုများအတွက်ရလဒ်များကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းကိုပြုလုပ်သင့်သည်။ SEO၊ ဂူဂဲလ်ကြော်ငြာများ၊ ဝက်ဘ်ဆိုက်များကိုနှိုင်းယှဉ်ခြင်းသို့မဟုတ်အီးမေးလ်စျေးကွက်ရှာဖွေခြင်း။ အကယ်၍ ပေးထားသောအသွားအလာရင်းမြစ်များထိရောက်မှုမရှိပါကငွေလဲနှုန်းနိမ့်ကျပြီးသုံးစွဲသူထံရောက်ရှိရန်ကုန်ကျစရိတ်မြင့်မားပါက၊ ဤလှုပ်ရှားမှုများအတွက်အသုံးပြုသောရန်ပုံငွေများကိုသင်၏စတိုးဆိုင်အတွက်အကောင်းဆုံးရလဒ်များရရှိစေသောကြော်ငြာပုံစံများသို့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းကပိုကောင်းသည်။
အပေါ်ဆုံးသွားဘားတွင်သင်၏အသုံးပြုသူကိုစိတ်ဝင်စားသောအမျိုးအစားများနှင့်အမျိုးအစားခွဲများအားလုံးပါ ၀ င်ကြောင်းသေချာစေပါ။ သူသည်သူစိတ်ဝင်စားသောအမျိုးအစားကိုရောက်ရန်စာမျက်နှာငယ်များစွာကို နှိပ်၍ မကြည့်သင့်ပါ - ၎င်းသည်ပင်မစာမျက်နှာမှဖြစ်သင့်သည်။ နောက်တစ်ခု - စာမျက်နှာကိုဖွင့်ပြီးချက်ချင်း menu ကိုပထမတစ်ချက်ကြည့်ရှုသင့်သည်။
e-commerce ကိစ္စများတွင်စတိုးဆိုင်၏စာမျက်နှာသည်စာသားအတိုင်းစက္ကန့်အနည်းငယ်အတွင်းဖွင့်သင့်သည်။ သင်အွန်လိုင်းစတိုး၏ဝက်ဘ်ဆိုက်ထဲသို့ ၀ င်ပြီးကုန်ပစ္စည်းတစ်ခုကိုမှာယူလိုသောအခါ၊ နောက်စာမျက်နှာငယ်တစ်ခုစီသည်ကုန်ပစ္စည်းအတွက်အချိန်များစွာယူရမည်။ မင်းဘာလုပ်မလို့လဲ? ထိုကဲ့သို့သောပြproblemနာမရှိသည့်အခြား site တစ်ခုကိုသင်တွေ့ကောင်းတွေ့လိမ့်မည်။
တကယ်တော့ "မိုဘိုင်းဖုန်းတစ်ခုတွင်စာမျက်နှာတစ်ခုတင်ရန်တစ်စက္ကန့်ကြာသောနှောင့်နှေးမှုကပြောင်းလဲမှုနှုန်းကို ၂၀% အထိလျှော့ချနိုင်သည်။ အသုံးပြုသူများသည်ဆိုက်ကို ၂ စက္ကန့်မျှမကြာအောင်တင်ရန်မျှော်လင့်ကြသည်။ မင်းစတိုးဆိုင်အတွက်လား စာမျက်နှာဝန်ချိန်ကိုမည်သို့လျှော့ချရမည်ကိုရှာဖွေပါ။
အွန်လိုင်းစတိုးဆိုင်ပိုင်ရှင်တိုင်းသည်ဖောက်သည်များအားအခမဲ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကိုမတတ်နိုင်ကြပါ။ အကယ်၍ သင်မလုပ်နိုင်လျှင်၊ ပထမ ဦး စွာ၊ ဈေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့်ရွေးချယ်ပြီးရွေးချယ်ပါ။ သင်ဒေါ်လာ ၂၀ ကုန်ကျမည့်ကုန်ပစ္စည်းတစ်ခုကိုသင်ဝယ်ချင်သည်ဆိုပါစို့။ ၎င်းသည်ပို့ဆောင်စရိတ်သည်အတူတူပင်ဖြစ်သည်။ ဒါကိုမှာထားမှာလား? အဲဒီအစားမဟုတ်ပါဘူး, ဒါကြောင့်ဖောက်သည်အများစုပြုလိမ့်မည်။ အကယ်၍ ပို့ဆောင်စရိတ်သည် ၅ ဒေါ်လာမှ ၈ ဒေါ်လာဖြစ်လျှင်၎င်းသည်ကွဲပြားလိမ့်မည်။
အသုံးပြုသူသည်ကုန်ပစ္စည်းတစ်ခုကိုရွေးချယ်ပြီးလှည်းထဲသို့ထည့်လိုက်သည်။ နောက်ဆုံးတွင်ကုန်သွားသည်။ သို့ဖြစ်လျှင်သင်သည်အဘယ်သို့ပြုနိုင်သနည်း။ ဒီဌန်အမျိုးအစားအတွက်စျေးနှုန်းလျှော့ချကြောင်းသူ့ကိုအကြောင်းကြားပါ။ သို့သော်၊ အင်တာနက်သုံးစွဲသူများအားလုံးအတွက်ဤအထူးလျှော့စျေးကိုကမ်းလှမ်းခြင်းမဟုတ်ပါ။ ကမ်းလှမ်းချက်ကိုကိုယ်ပိုင်ပြုလုပ်ရန်ဖြစ်သည်။ အွန်လိုင်းစတိုးများတွင်သင်စျေးနှုန်းညှိနှိုင်းခြင်းရွေးစရာကိုတွေ့နိုင်တယ်၊ ဤထုတ်ကုန်အတွက်သင်မည်မျှပေးဆပ်ရန်ဆန္ဒရှိကြောင်းသင့်အားမေးမြန်းလိမ့်မည်။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ, ငါမကြာခဏအမိန့်များအပေါ်အများအပြားရာပေါင်းများစွာကိုကယ်တင်နိုင်ခဲ့သည်။
လတ်တလောတွင်ပစ္စည်းဝယ်ယူခြင်းမှငွေသည်ယခင်ကကဲ့သို့လူကြိုက်များခြင်းမရှိခဲ့ပါ။ ၎င်းတွင်ပိုမိုကုန်ကျမှုရှိသည်။ လူတိုင်းသည်ကုန်ပစ္စည်းသို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုများအတွက်ကွဲပြားသော ဦး စားပေးငွေပေးချေမှုပုံစံရှိသည်။ တချို့က PayPal လိုအွန်လိုင်းလွှဲပြောင်းမှုကိုပိုနှစ်သက်ကြသည်။ ရွေးချယ်မှုတစ်ခုထက် ပို၍ ပေးခြင်းသည်ကျိုးနပ်ပါကသင်ဖောက်သည်များဆုံးရှုံးနိုင်သည်။
လှည်းကိုလှည်းနှစ်ဆင့်သို့တိုစေခြင်း၊ စာမျက်နှာ၏ဤအပိုင်းရှိအရာအားလုံးကိုဖယ်ရှားခြင်းအားဖြင့်ဝယ်သူကမှာကြားမှုကိုမပြုလုပ်ရ။ သို့သော်ကုန်ပစ္စည်းတစ်ခုသို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုကိုမှာယူသောဖောက်သည်များအားအခြားထုတ်ကုန်များကိုတင်ပြသင့်သည်။ ဤသည်ကိုသင်ဝယ်သူတစ် ဦး လျှင်ပျမ်းမျှအမိန့်အရေအတွက်တိုးမြှင့်ဖို့ခွင့်ပြုပါလိမ့်မယ်။
စတိုးဆိုင်တစ်ခုမှလုံခြုံသောဆက်သွယ်မှုလိုင်းကိုအသုံးပြုခြင်းသည်ယခုအခါစံဖြစ်သော်လည်းဤအရာကိုမထောက်ပံ့သောဆိုဒ်အချို့ရှိသေးသည်။ ထိုဆိုဒ်များကိုသင်မည်သို့အသိအမှတ်ပြုသနည်း။ ဝက်ဘ်ဆိုက်လိပ်စာဘေးတွင်ဥပမာ၊ Chrome တွင်အောက်ဖော်ပြပါပုံတွင်ဖော်ပြထားသောအချက်အလက်များပေါ်လာလိမ့်မည်။
ထိုကဲ့သို့သောမက်ဆေ့ခ်ျကိုစျေးဝယ်အားပေးဖို့မဖြစ်နိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ ဤအတောအတွင်း SSL လက်မှတ်ကိုအခမဲ့ရနိုင်သည်။ အမှန်တကယ်ဘာလုပ်လဲ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ အသုံးပြုသူနှင့်စက်ကြားရှိဒေတာကိုစာဝှက်ပြီးပြောင်းလို့မရဘူး၊ ကြားဖြတ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ စတိုးဆိုင်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်တွင်လည်းသူလုံခြုံစွာ ၀ ယ်နိုင်သည့်သုံးစွဲသူအတွက်အချက်ပြမည့်အချက်အလက်များပါ ၀ င်သင့်သည်။ စည်းမျဉ်းများသို့မဟုတ်လုံခြုံရေးမူဝါဒအကြောင်း။ ကြိုးဖုန်းနံပါတ်အပါအ ၀ င်ဆက်သွယ်ရန်အသေးစိတ်အချက်အလက်များမှာမဖြစ်မနေလိုအပ်သည်။ ပထမဆုံး ၀ ယ်ယူခြင်းမပြုမီဖောက်သည်များသည်စတိုးဆိုင်၏တည်ရှိမှုကိုစစ်ဆေးနိုင်သည်။ ဖုန်းကိုဘယ်သူမှမဖြေရင်သူတို့ကအမှာစာတွေချမှာမဟုတ်ဘူး။
သင်၏ဝဘ်ဆိုက်တွင် SSL အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်မရှိပါက၎င်းသည်သင်၏ဝက်ဘ်ဆိုက်အပေါ်မည်သို့သက်ရောက်မှုရှိသနည်း။
တည်နေရာအားနည်းသည် - စာမျက်နှာမြင်ကွင်းနည်းပါးသည်
SSL (Secure Socket Layer) အင်တာနက်ပရိုတိုကောတစ်ခုဖြစ်သည် ၎င်း၏လုပ်ငန်းတာ ၀ န်သည်ကွန်ယက်တစ်ခုလုံးကိုစာဝှက်ခြင်းအားဖြင့်ဝက်ဘ်ဆိုက်များရှိအချက်အလက်များကိုလုံခြုံစေရန်ဖြစ်သည်။ အသုံးပြုသူများသည် ၀ ဘ်ဆိုဒ်တစ်ခုသို့ဝင်သောအခါ browser နှင့်ဝက်ဘ်ဆိုက်ဆာဗာအကြားဆက်သွယ်မှုတစ်ခုတည်ဆောက်သည်။ SSL လက်မှတ်သည်ထိုဆက်သွယ်မှုကိုစာဝှက်ပြီးလုံခြုံစေသည်။ ၀ ဘ်ဆိုဒ်ပေါ်ရှိမည်သည့်လုပ်ဆောင်မှုမဆို - ပုံစံများဖြင့်အချက်အလက်ပေးပို့ခြင်း၊ ၀ ယ်ယူခြင်းများသည်တတိယပါတီသို့ပေါက်ကြားမည်မဟုတ်ပါ။ အခြား ၀ က်ဘ်ရှိအခြားနေရာများသို့လည်းလမ်းကြောင်းလွဲသွားမည်မဟုတ်ပါ။
SSL အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ် (သို့) ၎င်းမှမရှိခြင်းသည်သင်၏ ၀ ဘ်ဆိုဒ်သို့လာရောက်လည်ပတ်သူအရေအတွက်အပေါ်သိသာသောသက်ရောက်မှုရှိသည်။ ငါတို့အရင်ကပြောခဲ့သလိုပဲ၊ အွန်လိုင်းလုံခြုံရေးဟာပိုပိုပြီးအရေးကြီးလာတယ်။ အသုံးပြုသူများအတွက်အရေးကြီးသောအရာများနှင့်ဝန်ဆောင်မှုပေးသည့်အရာအားလုံးကိုလည်း Google search engines မှသဘောကျသည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်၏တည်နေရာအပေါ်များစွာအကျိုးသက်ရောက်သည်။ အကောင်အထည်ဖော်နေသော SSL အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်မရှိသောစာမျက်နှာများသည်ဤလက်မှတ်ရှိသည့်ပြိုင်ဘက်များ၏စာမျက်နှာများထက်နိမ့်သောနေရာများတွင်ရှိနေလိမ့်မည်။ ဒါ့အပြင်ဒီဟာကိုသင်၏အွန်လိုင်းစတိုးသို့မဟုတ်သင့်စီးပွားရေးကဒ်စာမျက်နှာ၏မြင်ကွင်းအရေအတွက်သို့တိုက်ရိုက်ကူးပြောင်းသွားလိမ့်မယ်။
သင်၏ SSL အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်မရှိသောသင်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်သည်ရှာဖွေမှုရလဒ်များတွင်မြင်သာမှုသိပ်မရှိသော်လည်းအသုံးပြုသူများသည်၎င်းကိုရှာရန်အခွင့်အလမ်းရှိနေ ဦး မည်။ ကံမကောင်းစွာပဲ, အကောင်အထည်ဖော်ထားသောလက်မှတ်မရှိရင်, သင်၏တုံမှုနှုန်းအများကြီးပိုမိုမြင့်မားပါလိမ့်မယ်။ မက်ဆေ့ခ်ျများကြောင့်ကျေးဇူးပြုပြီးသင်၏လည်ပတ်သူများသည် Chrome (သို့) Firefox ဘရောင်ဇာဖြစ်စေမည်သို့ပင်ဖြစ်စေသင်၏ visitors ည့်သည်များသည်ဘရောင်ဇာမှရရှိလိမ့်မည်။ သင်၏ဖောက်သည်များကသူတို့လာရောက်လည်ပတ်သော site သည်လုံခြုံမှုမရှိကြောင်းနှင့်အန္တရာယ်များကြောင်းသတိပေးလိမ့်မည်။ ဤအချက်အလက်အမျိုးအစားသည်သင်၏ကုန်ပစ္စည်းများသို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုများ၏ ၀ ယ်သူများကိုထိရောက်စွာခြိမ်းခြောက်နိုင်သည်။ သင်၏ကုမ္ပဏီအပေါ်ယုံကြည်မှုမှာလည်းသိသိသာသာကျဆင်းသွားလိမ့်မည်။
အကောင့်တစ်ခုတည်ဆောက်ခြင်း၏ပထမအဆင့်တွင်၊ ဥပမာအားဖြင့်မှာယူမှုတစ်ခုပြုလုပ်ရာတွင်အီးမေးလ်လိပ်စာနှင့်စကားဝှက်နှင့်အခြားဒေတာများသာလိုအပ်သည်။ ပိုရှည်သောပုံစံသည်အသုံးပြုသူအားအကောင့်တစ်ခုဖန်တီးရန်တားဆီးစရာမလိုသော်လည်း၊ သုံးစွဲသူများအနေဖြင့်မည်သည့်သတင်းအချက်အလက်ကိုပေးသင့်သည်၊ မည်သည့်ပုံစံဖြင့်ရှင်းလင်းရမည်ကိုဖော်ပြရန်အတွက်အကွက်တစ်ခုစီအတွက်မှတ်စုများကိုထည့်ပါ။
လူကြိုက်များသည့်တန်ဖိုးနည်းလေကြောင်းလိုင်းများ၏ ၀ ဘ်ဆိုဒ်သည်တယ်လီဖုန်းနံပါတ်ထည့်ရန်ပုံစံနှင့်ပတ်သက်သောသတင်းအချက်အလက်ကိုမရှင်းမလင်းဖြစ်နေသောသတိပေးချက်တစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။ အကျိုးသက်ရောက်မှု? အသုံးပြုသူများသည်မှတ်ပုံတင်ခြင်းအဆင့်ကိုဘယ်လိုဖြတ်သန်းရမလဲဟုမေးမြန်းသည့်ဂူဂဲလ်ဖိုရမ်များမှအကြောင်းအရာများစွာများစွာ။ ၎င်းသည်ကြီးမားသောအမှားတစ်ခုဖြစ်ပြီးဖြစ်နိုင်ချေရှိသောဖောက်သည်အမြောက်အများကိုဆုံးရှုံးစေနိုင်သည်။
မှတ်သားရန်မှာမှတ်ပုံတင်စရာမလိုပဲအသုံးပြုသူအား“ "ည့်သည်” အနေဖြင့် ၀ ယ်ယူရန်ခွင့်ပြုချက်သည်ယခုအချိန်တွင်ပုံမှန်ဖြစ်နေသည်ကိုသတိပြုသင့်သည်။
တစ်ဖက်တွင်, ထုတ်ကုန်ဖော်ပြချက်ရေးသားဖို့ကောင်းပါတယ် SEO စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုထည့်သွင်းစဉ်းစား, ထိုဖော်ပြချက်များသည် Google ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်၏အော်ဂဲနစ်ရလဒ်များကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်နိုင်သော်လည်းအခြားတစ်ဖက်တွင်သုံးစွဲသူများကို ၀ ယ်ရန်စည်းရုံးသင့်သည်။ ထုတ်ကုန်၏အရေးကြီးဆုံးအားသာချက်များနှင့်စိတ်ဝင်စားသူများနှင့်သက်ဆိုင်သောသတင်းအချက်အလက်များကိုအာရုံစိုက်ပါ။ သင်အမျိုးအစားတွင်ပေးထားသောပစ္စည်းတစ်ခုနှင့်သက်ဆိုင်သည့်မည်သည့်မေးခွန်းများမဆိုရရှိပါသလား။ ဒါကြောင့်ဒီအချက်အလက်နှင့်အတူဖော်ပြချက်ဖြည့်စွက်။
အထက်ပါလုပ်ရပ်များသည်အွန်လိုင်းစတိုးတွင်ပြောင်းလဲမှုကိုတိုးမြှင့်စေရန်ကူညီနိုင်သောရွေးချယ်ထားသောဖြေရှင်းနည်းများသာဖြစ်သည်။ သင်၏ site ပေါ် မူတည်၍ အခြားအလုပ်သည်ထိရောက်မှုရှိနိုင်သည်။ စတိုးဆိုင်ကိုစဉ်ဆက်မပြတ်တိုးတက်အောင်လုပ်ခြင်း၊ အပြောင်းအလဲများကိုမိတ်ဆက်ပေးခြင်းနှင့်၎င်းမှရရှိသောအကျိုးကျေးဇူးများကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းသည်အမြဲတမ်းကျိုးနပ်ပါသည်။